Banyere Anyị - Shijiazhuang Fanshen Trade Co., Ltd.
Shijiazhuang Fanshen Trade Co., Ltd.nke e hiwere na 2002, nke akpọburu dị ka ụlọ ọrụ aka, kesara ọtụtụ atụrụ na akpụkpọ anụ, okpu na ngwa ndị ọzọ maka ndị ahịa mba ofesi. Ebe ọ bụ na 2012, Anyị na-agbanwe azụmahịa anyị ịmepụta na ire maka ndị ahịa si mba ọzọ. Etinye ego na ụlọ ọrụ mmepụta ihe maka imepụta akpụkpọ anụ na ajị anụ na Gucheng obodo, Province Hebei.
N'okpuru imewe nkà ihe ọmụma nke "ịdị mfe & ịdị mma", companylọ ọrụ anyị mepụtara ọtụtụ akpụkpọ anụ akpụkpọ anụ, uwe atụrụ, okpu, ntị ntị na ngwaahịa ndị ọzọ. Ngwaahịa exported to Western Europe, the United States, Canada, Russia, Japan, wdg Karịsịa, simpledị dị mfe, ezigbo ọrụ, na handpicked akpụkpọ anụ nabatara ndị na-azụ ahịa ikiri ụkwụ si mba ọzọ. N'otu oge, anyị imewe otu akwakọbawo a akụ na ụba nke emebe ahụmahụ.
Ebe ọ bụ na oruru, Anyị ụlọ ọrụ mgbe niile na-eme ihe n'eziokwu, mmeri-mmeri dị ka azụmahịa na nzube, rube isi na mba ahia omume, na-agbaso mba ahịa iwu, iru a siri ike QC usoro na a zuru okè ọrụ usoro. Ugbu a, anyị guzobere ogologo oge mụ na imekọ ihe ọnụ na anụ ụlọ na ndị mba ọzọ ndị nkesa na Jeriko.
Anyị nwekwara ndị ọrụ aka na-arụ ọrụ aka, A na-eji aka aka mee akwa uwe anyị niile na-akpụ akpụ site na nsị. anyị nwere otu ejiri aka rụọ ọrụ dị ka nke a!
Anyị na-emeso ndị ahịa anyị otu ndị ahịa si amasị ka e mesoo ha, jiri ọrụ haziri ahazi, mgbanwe na-enweghị nsogbu na nloghachi, naanị anyị na-enye ngwaahịa nke ga-eme ka ndị ahịa nwee afọ ojuju.
Nabata ịkpọtụrụ anyị, Anyị ga-eme ike anyị niile iji nyere aka.